Avadiho ho PDF ny sary: ​​fika hanatanterahana azy amin'ny fomba hafa | Famoronana an-tserasera
Efa nahita ny filàna mamadika sary ho PDF ve ianao? Fantatrao ve raha azo atao? Indraindray, rehefa manao infogram, na grafika ianao ary mila mizara azy amin'ny fomba "matihanina" dia mila io sary io ianao hivadika ho PDF.
fa, Ahoana ny fomba hanovana sary iray ho PDF? Misy programa sa azo atao raha tsy mametraka na mampakatra zavatra amin'ny Internet? Androany izahay dia miresaka momba izany ary hanome anao ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra.
1 Inona ny rakitra sary
2 Inona no atao hoe PDF
3 Ahoana ny fomba hanovana sary iray ho PDF
3.1 Avadiho ho PDF ny sary iray miaraka amin'ny mpamoaka lahatsoratra
3.2 Avadiho ho PDF ny sary miaraka amina programa fanovana sary
3.3 Miova amin'ny PDF an-tserasera
Inona ny rakitra sary
Sary, na fisie sary, a endrika izay itehirizana ny angona nomerika an'ny sary ary izany dia hita amin'ny endrika samihafa, ny JPEG (na JPG), GIF, PNG, WebP (ankehitriny) malaza indrindra ...
Raha atao teny hafa, miresaka endrika iray izay ahalalana isika fa misy sary ao, ary, toy izany, izy io dia soloana. Ireo dia azo sokafana amin'ny programa marobe.
Inona no atao hoe PDF
Amin'ny lafiny iray, ny pdf dia fanafohezana ny fantatra amin'ny hoe Portable Document Format, na Portable Document Format. Araka ny tondroin'ny anarany dia karazana antontan-taratasy aseho amin'ny alàlan'ny elektronika izy io.
nisy novolavolain'i Adobe ary amin'izao fotoana izao dia nanjary iray amin'ireo mety indrindra amin'ny fandefasana sy fijerena antontan-taratasy matihanina izy io, satria manome anao endrika sy endriny tonga lafatra amin'ny fampiasana azy rehetra, manomboka amin'ny fampisehoana resume na asa iray, amin'ny fametrahana boky ary mety tsara amin'ny fanaovana pirinty izy io. .
Ahoana ny fomba hanovana sary iray ho PDF
Fantatrao izao hoe inona no tondroin'ny tsirairay amin'ireo teny ireo, ary azonao mazava tsara ny mahasamihafa ny iray sy ny iray hafa, fotoana izao hianarana ny fomba hanovana sary iray ho PDF.
Ho an'ity, misy safidy isan-karazany hisafidianana. Azonao atao, ohatra ataovy amina tonian-dahatsoratra, miaraka amina programa fanovana sary na koa amin'ny Internet.
Mba hanomezana safidy maromaro anao, andao hiresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Avadiho ho PDF ny sary iray miaraka amin'ny mpamoaka lahatsoratra
Ankehitriny ny mpamoaka lahatsoratra be mpampiasa indrindra, ankoatry ny Word, dia ny mpanoratra LibreOffice sy OpenOffice. Izy rehetra dia tena mitovy amin'ny fiasan'izy ireo, noho izany dia tena azo inoana fa ny dingana izay holazaintsika dia mitovy ho azy rehetra.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manokatra rakitra banga ao amin'ny tonian-dahatsoratra. Avy eo tsindrio Insert / Image. Io dia hahafahanao mitady ny solosainao amin'ilay sary tianao ampidirina, izay mety ho ilay tianao hivadika ho PDF.
Raha vantany vao azonao izany, ny zavatra mahazatra dia ny mampifanaraka ny haben'ny pejy Word, izany hoe ny habe A 4 fa azonao atao ny manova izany eo aloha ary mametraka endrika takelaka samihafa mba hivoahan'ny pejy amin'ny fomba samihafa ary, miaraka amin'ny io, ny sary noforoninao.
Aorian'io dia ho voatahiry ihany izy io, saingy araky ny fantatrao, ny endrika tsy fampiasa dia soratra, izany hoe, na .doc na .odt. Mba hanovana azy, tsy tokony hanome tahiry ianao raha tokony hanome tahiry. Amin'izany no ahafahanao manova ny endrika.
Izao dia mila mahita ny endrika PDF fotsiny ianao, manome anarana azy ary avy eo tsindrio ny save .. Ary azonao atao amin'ny PDF izany.
Avadiho ho PDF ny sary miaraka amina programa fanovana sary
Ny safidy manaraka arosonay dia ny manova sary iray ho PDF amin'ny alàlan'ny programa sary, izany hoe amin'ny alàlan'ny programa toa ny Photoshop, GIMP, sns.
Ny ankamaroan'izy ireo dia mamela anao hanoratra amina endrika maro samihafa, ny iray amin'izy ireo dia PDF, ka tsy hanana olana be amin'izany ianao.
Fa ahoana no anaovanao azy? Mitandrina:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra ny programa misy anao. Saika izy rehetra dia mitovy amin'ny resaka baiko ka tsy hanana olana amin'ny fanarahana anay.
Vantany vao nosokafana dia tsy maintsy tsindrio misokatra hanananao ny sary tianao hivadika ho PDF ao amin'ilay programa. Safidy iray hafa anananao dia ny manokatra ny fampirimana misy ny sary, apetaho eo amin'ny sary ny kursor ary kitiho ny bokotra eo ankavanana (ny iray amin'ny ankavia raha havia ianao). Eo ianao dia tsy maintsy manindry hisokatra amin'ny ... ary ho azonao ny anaran'ny programa fanovana sary. Handefa ny sary amin'ilay programa ity.
Efa anananao ao anaty programa io. Ary ankehitriny dia mila manova ny sary ho PDF ianao. Ho an'ity dia tsy maintsy mandeha mamonjy ianao ... Amin'ity tranga ity dia hahazo endrika sary maromaro ianao: jpg, gif, png ... fa afaka mahazo PDF koa ianao. Eo no tokony tsindrio.
Rehefa avy nanamarina ireto toetra manaraka ireto amin'ny PDF ianao dia ho vonona amin'ny solosainao, ary azonao alefa any amin'izay tianao na hampiasainao ho antontan-taratasy matihanina amin'izay ilainao izany.
Miova amin'ny PDF an-tserasera
Raha tsy te hampiasa tonian-dahatsoratra ianao dia tsy manana programa fanovana sary manohana ny endrika PDF, na te hanao an-tserasera fotsiny ianao fa tsy mila miahiahy, maro koa ireo safidy azo isafidianana.
Raha ny marina dia misy pejy an'arivony hanova sary ho PDF, ka ny tolo-kevitray dia:
Ny fizotrany amin'izy rehetra dia tena mitovy. Atombohy amin'ny fampakaranao ny sary tianao hovaina. Raha vantany vao fenoina izy dia manomboka ny fiovam-po ary afaka segondra vitsy dia avelanao hisintona ny PDF an'io sary io ianao raha tsy misy ado.
Ok izao Raha antontan-taratasy tena manan-danja izy io, ary ambonin'izany rehetra izany tsy miankina sy miaraka amin'ny angon-drakitra izay tsy maintsy arovanao, tsy mamporisika anao hampiasa an'io fomba io izahay Satria azonao atao ny mametraka ny fampahalalana amin'ny sary atahorana (na dia miantoka ny filaminana aza ireo pejy, amin'ny fotoana ampakaranao azy io dia tsy voafehinao intsony izay azo atao amin'io sary io).
Lafiny iray hafa izay tokony ho raisinao rehefa mampiasa an'io fomba io dia, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia mila ilay sary ianao hanana endrika jpg satria io no mahazatra indrindra mamadika. Amin'ny tranga sasany dia avelan'ny pngs hanova azy ireo ianao. Saingy amin'ny endrika sary hafa dia hanana olana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Avadiho ho PDF ny sary